Bosaaso: Arday ku geeriyootay shil gaari • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Bosaaso: Arday ku geeriyootay shil gaari
March 22, 2019 - By: Abdirisak Faamoos
Shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay inta u dhexeysa Kantaroolka magaalada Boosaaso iyo deegaanka Laag ee gobolka Bari.
Shilkan gaari ayaa lagu soo waramayaa in uu yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca raaxada ah iyo mid xamuul ah waxaana tirada dhimashada uu dhaliyay la sheegayaa in ay gaarayaan 4 ruux halka dhaawacuna la sheegayo in uu intaasi ka badan yahay
Dadka geeriyooday ayaa u badan arday la socotay gaariga nooca raaxada ee shilka galay waxaana ardaydan ay kasoo amba baxeen magaalada Boosaaso.
Allaha u naxariistee ardayda ku geeriyootay shilka gaari ayaa wararku ay sheegayaan in ay isku diyaarinayeen qaban qaabada xaflad la xiriirta qalinjabintooda iskuulka xili ay sanadkan ay dhameysteen fasalka ugu dambeeya ee dugsiga sare .
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa lagu soo waramayaa in ay ahaayeen arday wax ka barata mid kamid ah iskuulaadka ku yaala Bosaaso waxaana xiliga shilka uu dhacayay ay kusii jeedeen deegaanka loo dalxiis tago ee Laag.
Wixii warar ah ee kusoo kordha la soco